मानिसहरु के भाइरसमुक्त हुन्छनः अनिश्चितताले घेरिएको अवस्था ! वैज्ञानिकहरू नै रनभुल्ल
यस्तो छ, दीर्घ कोभिडको लक्ष्यण र अवस्था
प्रकासित मिति : २०७७ आश्विन २१, बुधबार प्रकासित समय : १२:३२
काठमाडौं । धेरैका लागि कोभिड १९ हल्का लक्षणहरू भएको सामान्य रोग भए पनि केहीका लागि यो थकाइ, कडा दुखाइ र सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षणसहित महिनौँ लम्बिने रोग बनेको छ।
हालसम्म महामारीका बेला जीवन बचाउने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित रहेको छ तर अब कोभिड १९ का दीर्घकालीन प्रभावहरूको पहिचान हुन थालेको छ।
त्यति मात्र होइन, किन केही मानिसहरू दीर्घकालीन कोभिडबाट पीडित छन् अथवा के कुनै बेला ती सबै भाइरसमुक्त हुन्छन् ? भन्ने आधारभूत प्रश्नहरू अनिश्चितताले घेरिएका छन्।
यसको कुनै चिकित्सकीय परिभाषा छैन र लक्षणहरूको सूची छैन। दीर्घ कोभिड भएका दुई व्यक्तिले नै फरकखाले अनुभव गर्न सक्छन्। यद्यपि आम लक्षण भनेको थकान हो।
दीर्घ कोभिडबाट पीडित जेड ग्रे क्रिस्टी भन्छिन्, मेरो थकावट यस्तो थियो कि जुन मैले पहिले कहिल्यै पनि अनुभव गरेकी थिइनँ। दीर्घ कोभिडका कारण मानिसहरूले सघन उपचारमा रहेर निको हुन समय मात्र लगाइरहेका छैनन्।
सामान्यखाले लक्षण भएका मानिसहरूले समेत लामो समयसम्म देखिने र कडा खाले स्वास्थ्य समस्याहरूको पनि सामना गरिरहेका छन्। युनिभर्सिटी अफ एक्सेटरका प्राध्यापक डेभिड स्ट्रेन भन्छन्, हामीलाई लामो समयसम्म रहने कोभिड छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन।
उनले दीर्घ कोभिडका बिरामीहरूलाई आफ्नो क्रोनिक फटिग सिन्ड्रोम क्लिनिकमा हेरिसकेको बीबीसीलाई बताए। जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानपत्र अनुसार अध्येताहरूले रोमको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालका १४३ जना कोभिडका बिरामीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।
यूकेमा ४० लाख मानिसहरूले प्रयोग गर्ने कोभिड सिम्प्टम ट्र्याकर एपले ३० दिनपछि पनि २१ प्रतिशत मानिसहरूमा लक्षणहरू देखिएको पाएको छ।
हालसम्म प्रकाशित नभएको उसको विवरणले ५० जनामा १ जना अर्थात् दुई प्रतिशत मानिसहरूमा ९० दिनसम्म पनि दीर्घ कोभिडको लक्षण देखाएको छ।
चिकित्सकहरूले कडाखाले कोभिड र थकानबीच कुनै सम्बन्ध पाउन सकेनन्। यद्यपि कडा खाले थकान मात्र दीर्घ कोभिडको लक्षण हो।
मानिसहरूमा कोभिड कसरी ठीक भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटी अफ ल्यास्टरस्थित पीएओएसपी कोभिड कार्यक्रमका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता क्रिस ब्राइट्लिङ्ग के विश्वास गर्छन् भने निमोनिया विकास भएका मानिसहरूमा फोक्सोमा हुने क्षतिका कारण धेरै समस्या देखापर्न सक्छन्।
किङ्ग्स कलेज लण्डनका प्राध्यापक टिम स्पेक्टर भन्छन्, यदि लामो समयसम्म रहने झाडापखाला छ भने पेटमा भाइरस पाइन्छ, यदि सुँघने शक्ति कमजोर भइरह्यो भने नसामा भाइरस हुनसक्छ त्यसैले के हुन्छ भन्ने आधारमा भाइरस कहाँ छ भन्ने थाहा हुनसक्छ।
मस्तिष्कको संरचनामा परिवर्तन भएका प्रारम्भिक सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् र त्यसबारे अझै अनुसन्धान जारी छ।कोभिड १९ ले रगतमा अझ अनौठा कुराहरू गर्छ। जस्तो कि अस्वभाविक घेराहरू बनाउने र शरीरभरि रक्तसञ्चार गर्ने नलीहरूलाई क्षति पुर्‍याउने।
प्राध्यापक स्ट्रेनले बीबीसीलाई भने, तन्तुहरूमा अक्सिजन र पोषण पुर्‍याउने वयस्क नभइसकेका रक्तवाहकसम्बन्धी एउटा सिद्धान्तमा काम गरिरहेको छु। तर लामो समयसम्म रहने कोभिडको कारण के हो भन्ने पत्ता नलागुन्जेल उपचार कसरी गर्ने भन्न पनि कठिन हुने उनी बताउँछन्।
समयसँगै दीर्घ(कोभिड लागेका मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको देखिन्छ। यद्यपि गत वर्ष मात्र यो भाइरस देखा परेको र यसै वर्षको सुरुमा विश्वव्यापी भएकाले यसबारे लामो समयको विवरण उपलब्ध छैन।
प्राध्यापक ब्राइट्लिङ्गले सङ्क्रमण भएका २५ वर्षका मानिसहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन आफूहरूलाई भनिएको बताए। उनले आफूलाई उनीहरूमा बढिमा एक वर्षसम्म दीर्कोभिड हुनसक्ने र त्यसभन्दा पर नजाला भन्ने लागेको तर आफू गलत पनि हुनसक्ने बताए।